Uyenza njani iMicrosoft Office 2016 ngonaphakade - VidaBytes | LifeBytes
Uyenza njani iMicrosoft Office 2016 unaphakade
Uthungelwano kwiNethiwekhi | | iofisi
Mhlawumbi ucinga ukuba iyasebenza Microsoft Office 2016 Kunzima, kodwa siyakuxelela ukuba akuzange kube lula ngaphambili. Ungasebenzisa i I-activator ye-2016 ngokukhawuleza ngeendlela ezahlukeneyo. Nangona kunjalo, ngaphambi kokuchaza indlela yokuyisebenzisa, kubalulekile ukuba uqale uthethe ngayo Microsoft Office 2016 kunye nokubonelela ngayo.
1 Yintoni iMicrosoft Office 2016?
2 Uyenza njani iofisi simahla?
2.1 Indlela yokuqala: i-serial office 2016 esemgangathweni kunye nokudityaniswa kobungcali
2.2 Uluhlu lweeMveliso zamaqhosha eMicrosoft Office 2016:
2.3 Isitshixo se-MS Office 2016:
2.4 Isitshixo semveliso sasimahla seMS Office:
2.5 Imveliso ephambili yeMicrosoft Office 2016:
2.6 Inombolo ye-MS Office 2016 yeNombolo:
2.7 Isitshixo semveliso seOfisi epheleleyo ka-2016:
2.8 Indlela yesibini: yenza iofisi 2016 isebenze ngaphandle kweenkqubo kwifayile yebhati
2.8.1 Landela la manyathelo angezantsi ukuze uvule iMicrosoft Office 2016:
2.9 Indlela yesithathu: ngeKMS Pico
2.9.1 Amanyathelo okukhuphela i-activator epheleleyo ye-2016:
3 Indlela yesine: ukwenziwa kweOfisi ka-2016 yoBuchule kunye nomgangatho kusetyenziswa iMicrosoft Toolkit
3.1 Landela la manyathelo ukukhuphela kunye nokufaka izixhobo zeMicrosoft ukwenza iOfisi yeMicrosoft ka-2016 isebenze
4 Ungayenza njani iOfisi ka-2016
5 Imibuzo ebuzwa rhoqo malunga nokusebenza kwe-Microsoft Office 2016
5.0.1 Ngaba kukhuselekile ukwenza iOfisi yeMicrosoft isebenzise ezi ndlela?
Yintoni iMicrosoft Office 2016?
Microsoft Office 2016 Inguqulelo yesuti yemveliso yeMicrosoft Office, kodwa iyaphumelela zombini kwiOfisi 2013 nakwiOfisi yeMac 2011, kwaye yandulela iOfisi 2019 kuwo omabini amaqonga.
Le nguqulo ye Microsoft Office 2016 Kuboniswa kwimbonakalo ebonakalayo ehlaziyiweyo ngokusebenza okutsha kunye nokubonakala okuphuculweyo. Phakathi kwezona zinto zisetyenzisiweyo uya kuzifumana: iLizwi, i-Excel, iPowerPoint kunye ne-Outlook.
Kule nqaku uza kufumana lonke ulwazi oluyimfuneko khuphela iOfisi ka-2016 i-32 bits simahla kwi-Spanish igqityiwe nge-serial kwaye ukhuphele i-Ofisi ka-2016 engama-64 engama-XNUMX simahla kwiSpanish igqityiwe nge-serial. Khumbula ukukhuphela kuphela iphakheji ehambelana neprosesa yekhompyuter yakho.
Uyenza njani iofisi simahla?
Ukuba awunalo ulwazi ngendlela yokufaka kunye sebenzisa iOfisi yeMicrosoft simahla, Akukho sidingo sokukhathazeka, kule tutorial uza kufumana lonke ulwazi oluyimfuneko inyathelo ngenyathelo.
Namhlanje zininzi, iindlela ezininzi zokwenza yenza iofisi isebenze mahala kodwa mhlawumbi ayizukusebenza yonke. Abanye baye bayeka ukusebenza kwaye ezinye azihambelani kwiinkqubo ezithile zokusebenza. Nangona kunjalo, apha sikulethela iindlela ezine ezisebenza ngokwenene kwaye zikho namhlanje.
Indlela yokuqala: i-serial office 2016 esemgangathweni kunye nokudityaniswa kobungcali
Eyokuqala yeendlela kukudlula isitshixo semveliso kwaye le ayisiyonto ingaphezulu kweseti emalunga nama-25 oonobumba abalandelelanayo. Ezinye izitshixo zemveliso Microsoft Office 2016 bahlala benabalinganiswa abaninzi. Eli qhosha liya kuxhomekeka kwindlela oyifumene ngayo. Apha ngezantsi uyakufumana uluhlu lwamaqhosha emveliso sebenzisa iMicrosoft Office 2016:
Uluhlu lweeMveliso zamaqhosha eMicrosoft Office 2016:
Isitshixo se-MS Office 2016:
Isitshixo semveliso sasimahla seMS Office:
Imveliso ephambili yeMicrosoft Office 2016:
Inombolo ye-MS Office 2016 yeNombolo:
Isitshixo semveliso seOfisi epheleleyo ka-2016:
Ukuyisebenzisa ngezi zitshixo kufuneka kuqala uyifakele. Ukuba awukayifaki okwangoku, eli lixesha elifanelekileyo lokwenza njalo. Okwesibini, nje ukuba ifakwe, kufuneka uqale nayiphi na inkonzo yayo, ndincoma igama. Emva koku, xa uqala inkonzo iyakukucela kwangoko Uthotho lwemveliso kwaye ngale ndlela ungayenza isebenze. Nangona kunjalo, ukuba ayibuzi, landela la manyathelo:
Cofa apha lovimba kwaye ukhethe akhawunti.
Khangela iseshoni «Isitshixo semveliso»E cofa kuyo.
Ngenisa iqhosha lemveliso ku sebenzisa iOfisi yeMicrosoft kwaye uqinisekise iphasiwedi.
Umyalezo uza kuvela uthi «IMicrosoft Office 2016 yenziwe yasebenza». Ngale ndlela uya kuba nepakeji yakho IMicrosoft Office 2016 yenziwe yasebenza Kwaye uya kuba nakho ukubala kuyo yonke ukusebenza kwayo.
Ukuba le ndlela ayikasebenzi kuwe, kodwa usafuna Sebenzisa iMicrosoft Office 2016, qhubeka ufunda iindlela ezilandelayo.
Indlela yesibini: yenza iofisi 2016 isebenze ngaphandle kweenkqubo kwifayile yebhati
Le ndlela ilula kancinci kodwa iyasebenza sebenzisa iOfisi kaMicrosoft ngaphandle kweenkqubo kwaye ngaphandle kwezitshixo zemveliso. Inokubandakanya ukwenza ifayile yebod ebifakwe ngaphambili Ukusebenza kweMicrosoft Office 2016.
Landela la manyathelo angezantsi ukuze uvule iMicrosoft Office 2016:
Khuphela ikhowudi evela kule webhusayithi. (https://www.miblocdenotas.com/279692)
Kwidesktop yakho yePC, cofa ekunene kwaye wenze uxwebhu lweencwadana.
Cola ikhowudi oyikhuphele ngaphambili kwaye ugcine uxwebhu njengo «isilumko. cmd»Kufuneka ufake amanqaku okucaphula egameni ukuze igcinwe ngokuchanekileyo.
Sebenzisa ifayile isilumko. cmd kwaye mandenze i Ukusebenza kweMicrosoft Office 2016.
Ukuba ufikelele kweli nqanaba kwaye ulandele onke amanyathelo, kuya kufuneka ube sele unayo isebenze iMicrosoft Office 2016. Nangona kunjalo, ukuba oku akunjalo kwaye ukwenziwa kusebenze kusilele, ndicebisa ukuba uqhubeke ufunda iindlela ezilandelayo.
Indlela yesithathu: ngeKMS Pico
ukuba Sebenzisa iMicrosoft Office 2016 kwaye uyonwabele imisebenzi yayo, ungasisebenzisa isixhobo Incopho yeKMS. Esi sixhobo kulula kakhulu ukusisebenzisa kwaye sisebenza ngokukuko ukwenza kusebenze iofisi nakweyiphi na inguqulelo. Incopho yeKMS es I-activator ye-2016 Eyona iphakanyisiweyo, ikwaqwalaselwa njengeyona nto inamandla yokuqhekeza iofisi ngo-2016.
Unako Khuphela iKMSPico kwiphepha layo elisemthethweni, ukuze uqiniseke ukuba ukhuphela kwaye ufake ingxelo esemthethweni ye I-KMSPico yokupakisha iofisi ngo-2016.
Amanyathelo okukhuphela i-activator epheleleyo ye-2016:
Khuphela iofisi ye-KMS Activator 2016.
Sebenzisa ifayile ekhutshelweyo .exe kwaye uqiniseke ngokugcina zonke iinkonzo zivaliwe Microsoft Office 2016.
Nje ukuba inkqubo ilayishe, cofa kwi icon Microsoft Office 2016 kwaye inkqubo yokutshaja iya kuqala. Ayinamsebenzi inguqulelo ye- Ofisi ye2016 oyifakileyo, nokuba kunjalo, iyakwenziwa isebenze ngempumelelo. Ungayifaka IMicrosoft Office 2016 yobungcali kunye ne-2016 o IMicrosoft Office 2016 esemgangathweni.
Emva koku, iphakheji yakho 2016 iya kusebenza ngokupheleleyo kwaye Isisebenzisi seMicrosoft Office 2016 KMSPico iya kuba iwenzile umsebenzi wayo.
Qinisekisa ukuba Ukusebenza kweMicrosoft Office 2016 yenziwe ngokuchanekileyo. Vula inkonzo yeOfisi ka-2016, cofa ifayile, kwaye ukhethe iakhawunti.
Kwicandelo le Ulwazi ngemveliso umyalezo kufuneka uvele Imveliso esebenzayo. Ukuba akunjalo, kukho into engahambanga kakuhle kwaye ndicebisa ukuba uphinde uzame le ndlela.
Ukuba emva kwelinye ilinge awukwazanga ukwenza imveliso yakho isuswe Microsoft Office 2016, Ndicebisa ukuba usebenzise le ndlela ilandelayo.
Indlela yesine: ukwenziwa kweOfisi ka-2016 yoBuchule kunye nomgangatho kusetyenziswa iMicrosoft Toolkit
Le ndlela ifana kakhulu ne I-KMS Pico yeofisi ka-2016 kodwa ihlaziyiwe ngakumbi kwaye inonxibelelwano lobuhlobo. Isixhobo seMicrosoft ligama lesixhobo eliza kukunceda Sebenzisa iMicrosoft Office 2016. Okwangoku, esi sisixhobo esisebenzayo nesinyani esihlala siphumelele nge-100%. Imahala, kulula ukuyisebenzisa, kwaye ayinantsholongwane kwaphela, ke awunakukhathazeka.
Isixhobo seMicrosoft ngaphambi kokuba yaziwe njenge Isixhobo se-EZ kwaye yaphuhliswa ngo-2010 lilungu eliphambili le- Ubomi bam beDijithali. Esi sixhobo sisebenza ngokuchanekileyo kwi imo engeyo yokusebenza, ke awuyi kuyidinga i-Intanethi ukuze wenze iOfisi yakho ngo-2016 isebenze.
Ukuze usebenzise esi sixhobo, kufuneka uqale khubaza okwethutyana i-antivirus yakho. Kungenxa yokuba i-activator sisiqwengana esiya kuguqula ikhowudi yephakheji yakho ye-Ofisi ka-2016 kwaye siyenze isebenze. Sukuba nexhala, emva koku, unokwenza ukuba i-antivirus yakho isebenze kwakhona kwaye uqhubeke nokukhusela imfihlo yakho.
Landela la manyathelo ukukhuphela kunye nokufaka izixhobo zeMicrosoft ukwenza iOfisi yeMicrosoft ka-2016 isebenze
Ukukhuphela Isixhobo seMicrosoft kwiphepha layo elisemthethweni.
Unzip ifayile Isixhobo seMicrosoft okhutshelweyo. Igama lokugqithisa lefayile .rar ngu "igosa-kmspico.com”. Emva koku, sebenzisa ifayile Izixhobo zeMicrosoft.exe ukuqala inkqubo.
Uya kubona ibhokisi yezixhobo kunye neOfisi kunye nelogo yeWindows kwiscreen. Khetha ilogo yeOfisi ukuze uqhubeke.
Iwindow entsha yokuzivelela izakuvela ngeendlela ezininzi ezibandakanyiweyo. Cofa kwithebhu Ukusebenza kwaye emva koko ucofe EZ-isilumeki. Le nkqubo iza kuthatha imizuzwana embalwa ukuyigqiba.
Emva koko, ungabona umyalezo wefestile usithi IOfisi ka-2016 yenziwe yasebenza.
Ngale ndlela iphakheji yakho yeOfisi 2016 iya kwenziwa isebenze ngokusisigxina. Ukujonga imeko yemveliso yakho, qalisa inkonzo yeOfisi ka-2016, cofa Ifayile> iakhawunti> ukusuka apho ungawubona umyalezo Imveliso esebenzayo.
Yiyo leyo, ngale ndlela unokuvula nayiphi na inguqulelo ye- IMicrosoft Office ngokusisigxina. Kwakhona, esi sixhobo sisetyenziselwa ukwenza uguqulelo lweWindows.
Ungayenza njani iOfisi ka-2016
Ngale vidiyo ilula uya kufunda ngendlela elula kakhulu yokwenza kusebenze iOfisi ka-2016 ehlaziyiweyo.
Imibuzo ebuzwa rhoqo malunga nokusebenza kwe-Microsoft Office 2016
Ngaba kukhuselekile ukwenza iOfisi yeMicrosoft isebenzise ezi ndlela?
Ewe kunjalo, ukwenza iOfisi isebenze kuyo nayiphi na kwezi ndlela ikhuselekile kwaye ikhuselekile. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ulandele onke amanyathelo abonisiweyo ukuqinisekisa inkqubo eyimpumelelo.
Ndenza ntoni xa iphepha-mvume liphela emva kwexesha?
Ukuba emva kwethutyana iphepha-mvume liphelile kwaye ayikuvumeli ukuba usebenzise yonke imisebenzi, lixesha lokuba uphinde wenze into esebenzayo. Ndikucebisa ukuba usebenzise indlela ye- Isixhobo seMicrosoft Ukuqinisekisa ukusebenza kwayo ekusebenziseni eyakho Microsoft Office 2016.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubomi beByte » iofisi » Uyenza njani iMicrosoft Office 2016 unaphakade
Uyilo lomncedisi wabathengi kwiinkcukacha zedatha!
Yintoni i-middleware? Imbali, usetyenziso, kunye nokunye